အီ စိမ့် နေ တဲ့ ည – Hlataw Entertainment
အီ စိမ့် နေ တဲ့ ည
July 28, 2021 By admin News
တိတ် ဆိတ်နေ တဲ့ ညတညမှာ နှစ်နှစ်ချြိက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေရာမှ ပူအိုက်လာသလိုခံစားလိုက်ရတာကြောင့်ကျွန်တော်လူးကာလိမ့်ကာနှင့်နိုးလာသည်။ အိပ်မှုံစုံဖွားနဲ့ အဲကွန်းကိုကြည့်လိုက်တော့ဘာမီးမှမလင်း… စိတ်အတော်ညစ်သွားတယ်။ ရန်ကုန်မြို့အစွန်အဖျား၃ထပ် တိုက်ခန်းအတွဲလေးတွေမှာနေမိတာကိုး… ထုံးစံအတိုင်းမီးကပျက်နေပြီလေ။ ကုတင်ဘေးနားရှိတဲ့ပြတင်းပေါက် ကိုထဖွင့်… ပြတင်းပေါက်ကလဲဖွင့်ခဲတော့ကြပ်နေသေးတယ်…. ညကသောက်ထားတဲ့အရှိန်နဲ့ လူကပိုပူနေသလိုခံစားနေရသည်။ ကုတင်ဘေးက အသင့်ထား တဲ့ရေဗူးကိုလှမ်းစမ်းကြည့်တော့လဲရေကုန်နေတယ်…. သက်ပျင်းချရင်း ဓါတ်မီးကို ကုတင်ဘေးက Laptop တင်ထားတဲ့စားပွဲ ပေါ်ကနေစမ်းတဝါးဝါးနှင့်ရှာဖွေပြီးနောက် မီးဖိုချောင်သို့ ရေသွားယူ၊ အပေါ့သွား အခန်းထဲပြန်ဝင်ကာ ခြေပြစ်လက်ပြစ်လှဲချ လိုက်မိသည်။ နာရီကြည့်လိုက်တော့မနက် ၂နာရီထိုးခါနီး… ဟူးးးးး….. သည်ညကိုဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ရပါမလိမ့်…..။
အကျီင်္ကိုချွတ်လိုက်ပြီး ယပ်တောင်လေးတဖြတ်ဖြတ်ခပ်ကာ ပြန်အိပ်မပျော်နိုင်တာသိသော်လည်း သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်အောင် ပုဆိုးကိုပါဖြေ ချလိုက်ပြီး လေဝင် အောင်တဖြတ်ဖြတ်လှူပ်ခါနေမိသည်။ ထိုအချိန်မှာပဲ ဘေးအခန်းက ငြီးသံ သဲ့သဲ့ကိုကြားမိလိုက်သည်။ စိတ်ထဲတွင်တော့လန့်သလိုလို ဘာလိုလို နဲ့မသိုးမသန့်တော့ဖြစ်သွားမိသည်။ အမြဲလိုလိုပိတ်ထားသော လိုက်ကာလေးကိုအသာလှပ်ပြီး ကြည့်လိုက်မိတော့ အပြင်မှာတော့လ တော်တော်သာနေကာ ဘေးအခန်းပြတင်းပေါက်များလဲဖွင့်ထားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ အရင်တုန်းကတော့တခါတခါ ဟိုဘက်အခန်းကိုမျက်စိ ရောက်မိလျှင် တွေ့တတ်ရသည်က အသက်၃၀ ဝန်းကျင်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုသတိထားမိပြီး အိမ်အောက်လမ်းမတွင်လဲ မကြာခဏဆိုသလို သတိထားမိနေသည်။ ဟိုဘက်သည်ဘက်က ၆ပေ ခန့်သာခြားပြီး ပြတင်းပေါက်ခြင်းကတဲ့တဲ့ဆိုတော့ မြင်မိတာပေါ့။
အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင်တော့မှန်အမဲတွေဆိုတော့ ကိုယ့်အခန်းဖက်က ပြတင်းပေါက်ကအမြဲပိတ်ပြီး လိုက်ကာ ပါချထားတော့ သည်ဖက်အခန်းမီးဖွင့်ထားရင်တောင် ဟိုဘက်ကမြင်ဖို့မလွယ်ဘူးလေ… ညနေပိုင်းဆိုဟိုဘက်ကအမျိုးသမီးရေချိုးတဲ့အချိန်တွေဆိုကိုယ့်အခန်းကိုအမှောင်ချပြီး ချောင်းကြည့်မိပါရဲ့.. အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ်လူပျို သွေးသား ဆူဖြိုးနေတဲ့အရွယ်ဆိုတော့ ကြည့်မိတာမဆန်းဘူးထင်ပါရဲ့။ သူ့ပုံစံက တော့အသားတော်တော်ဖြူပြီး ဆံပင် ကျောလယ်လောက် တင်းပါး ကတော့တော်တော်လေးလှတယ်လို့ပြောရမဲ့အထဲမှာပါသလို ရင်သားကလဲ စူပြီးချွန်နေတယ်။ ဘေးတိုက်ကြည့်လိုက်ရင် ရင်သားက ကြီးတော့အနည်းငယ်အောက်ကိုတွဲနေသလိုထင်ရပေမဲ့ တလုံးတခဲကြီးရှိပါသေးတယ်။ မျက်နှာကတော့လူမျိုးတခုခုစပ်တယ်ထင်တယ်။ မျက်ခုံးမွေးပုံဖော်ထားတာကတော့သူ့ရဲ့ မျက်နှာကို ဆက်ဆီ ဖြစ်အောင်အဓိက ပံ့ပိုးပေးနေသလိုပဲ… နုတ်ခမ်းလေးအနည်းငယ်ထူပေမဲ့တော်တော်ကြည့်ကောင်းတဲ့မျက်နှာမျိုးပါ။
သည်လိုပုံစံမျိုးရှိတဲ့မိန်းခလေးတယောက်အခန်းကနေငြီးသံလေးထွက်လာတော့စိတ်ဝင်စားမိတာမဆန်းပါဘူး။ ခုတင်ပေါ်တပလ္လင်ခွေထိုင်လိုက်တော့ဖြေထားတဲ့ပုဆိုးတင်ပါးအောက်ကိုပြေကြသွားတယ်။ ငြီးသံလေးအပြင် တဖတ်ဖတ်နဲ့ရင်းနှီးနေတဲ့အသံလေးတွေပါကြားနေရတယ်။ ရင်ခုန်တာလဲတဒုန်းဒုန်းနဲ့ပေါ့။ ခုတင် ခြေရေင်းဘက်ကိုရွေ့လိုက်တော့ သူတို့ခေါင်းရင်းမှာထွန်းထားတဲ့ LED ဘထ္ထရီ မီးလေးကြောင့် လည်ပင်းနားလောက်ထိ တွေ့လိုက်ရတယ်။ အားမလိုအားမရဖြစ်ကာ ဒူးထောက်ထိုင်ပြီးပြတင်းပေါက်ကခေါင်းပါထွက်၊ ဘောင်လေးကိုလက်ကကိုင်ပြီးသေချာကြည့်မိတယ်။ အမျိုးသားတယောက်က ခုဏကပြောခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကို အပေါ်ကနေ လှေကြီးထိုးပုံစံနဲ့ ချစ်ခန်းဝင်နေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။ အရင်ကဆိုည အိပ်ချိန်မတိုင်ခင်လောက်ကထဲက သူတို့လဲ ပြတင်းပေါက်ပိတ် နေကြဆိုတော့အိပ်တာကိုတခါမှမတွေ့ဖူးဘူး။
ငြီးသံလေးကလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျယ်လာပြီး အမျိုးသားရဲ့ဆောင့်ချက်တွေကလဲပြင်းလာတယ်။ ဒီဘက်ခန်းကကျွန်တော်ကတော့ အသက်ရှူဖို့တောင်သတိမရလောက်အောင် ရင်တွေခုန်ပြီး ပြေးဝင်သွားချင်စိတ်တောင်ပေါက်နေမိတယ်။ သူတို့ရဲ့အသက်ရှူသံတွေပြင်းနေသလို ဒူးထောက်ပြီးချောင်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ညီလေးကလဲမာန်တင်းပြီးတဆတ်ဆတ်နဲ့တောင် ခုန်နေတယ်။ မရည်ရွယ်ပဲ ညာဘက်လက်ကညီလေးကိုဆုတ်ကိုင်ပြီး သာသာလေးပွတ်လိုက်တော့ စိတ်ထဲမှာ တခုခုကိုကျေနပ်သွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။ ဒီအချိန်မှာပဲ အမျိုးသားက ဒူးထောက်လိုက်ပြီး အမျိုးသမီးရဲ့ခါးကိုကိုင်ကာ အနောက်ကနေလုပ်မဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ အမျိုးသားရဲ့ညီလေးကလဲနောက်ခံမီးရောင်နဲ့မြင်လိုက်ရတာ သူလဲ စံချိန်မှီပဲကိုး…. အမျိုးသမီး လေးဘက်လေးထောက်လိုက်တော့ ဖင်လုံးလေးကလှလိုက်တာလို့စိတ်ထဲတွေးလိုက်မိတယ်။
အဆင်သင့်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲ ညီလေး က အထဲကိုစွတ်ကနဲပဲဝင်သွားတာ။ ခါးလေးကိုကိုင်ပြီးတဖတ်ဖတ်နဲ့နောက်ကနေစောင့်စောင့်ပြီးလုပ်နေတာ အမျိုးသမီးလဲအတော်ထိတယ်ထင်ပါရဲ့…. ငြီးသံလေးတွေကျယ်လာပြီး အမျိုးသမီးလက်တဖက်ကနောက်ကိုပြစ်ပြီး အမျိုးသားဖင်ကို ပုတ်ပုတ်ပြီး စောင့်ခိုင်းနေတယ်။ မှောက်ခုံနေတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့နို့ကြီးတွေက တော်တော်ကိုကြီးတာပဲ…. အားရပါးရစောင့်နေတဲ့အမျိုးသားက ဆတ်ကနဲ သူ့ညီလေးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးအမျိုးသမီးရဲ့တင်ပါးပေါ်မှာအရည်တွေကိုပန်းထုတ်လိုက်ပြီး အမျိုးသမီးကလဲ ဒူးလေးကိုဖြေချပြီးမှောက်ယက်လေး အမောဖြေနေတယ်။ ကြည့်ရတာအမျိုးသမီးဆန္ဒမပြည့်လိုက်ဘူးလို့ထင်မိတယ်။ အမျိုးသားက ဘေးမှာအသင့်ဆောင်ထားတဲ့တစ်ရှူးနဲ့ အမျိုးသမီးတင်ပါးနဲ့ခါးပေါ်က အချစ်ရည်တွေကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးနေတာကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော် လဲ ပွတ်သပ်နေမိတဲ့ကျွန်တော့်ညီလေးစိတ်အလိုကြအောင် ပွတ်သပ်လှူပ်ခါပေးလိုက်တော့။
အချစ်ရည်လေးတွေထွက်ချင်လာမိတယ်။ ဘာမှလဲမပြင်ဆင်ထားတော့ ထောက်ထားတဲ့ဒူးကိုအပေါ်နဲနဲကြွရပ်ပြီး ပြတင်းပေါက်ကပဲ အချစ်ရည်လေးတွေကိုသွန်ချလိုက်မိတာပေါ့….. ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ ခုတင်ပေါ်ပြန်လှဲချက ခုဏကမြင်ရတဲ့အတွဲကို ပြန်မြင်ယောင်ရင်း… အချစ်ရည်လေးတွေထွက်သွားလို့ဆန္ဒပြည့်သလိုလိုနဲ့တခုခုတော့လိုနေသေးသလိုခံစားလိုက်မိသည်။ သြော်…. သူနဲ့ပြတ်တာ ၄ လ တောင်ရှိပါပြီရောလားဆိုတာကို သတိရလိုက်မိတယ်။ တပါတ်တခါအချစ်ရည်လေးတွေကိုမညိုမငြင် ယုယုယယ ထုတ်ပေးတတ်တဲ့ချစ်သူတယောက် သူလဲခုလိုတောင့်တနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုများဆန္ဒဖြေဖျောက်နေလဲလို့တွေးလိုက်မိသည်။ မီးကုန်ယမ်းကုန်သောင်းကျန်းခဲ့ကြသောအချစ်ညလေးတွေကို ပြန်လည်လွမ်းဆွတ်သတိရနေချိန်မှာပဲ တီ ဆို အဲကွန်းကမြည်သံလေးကြားရတော့ ပျော်သွားမိတယ်။ အိပ်ရဦးမှာပေါ့လေ….. တောင်တွေးမြောက်တွေးနဲ့ဘယ်အချိန်အိပ်ပျော်သွားလဲတောင်မသိပါဘူး။
တရေးပြန်နိုးတော့တော်တော်လေးချမ်းသလိုဖြစ်နေမိသည်။ ဪ… ချမ်းမှာပေါ့ အကျီင်္မဝတ်ထားပဲ ပုဆိုးကလဲဝတ်မှမထားတာကိုး….. ကုန်းရုံးထပြီး ခြေရင်းက ပုဆိုးကိုဆွဲယူလိုက်တော့တခုခုနဲ့ဖိထားသလိုလက်ထဲပါမလာဘူး။ တခုခုနဲ့ဖိထားသလိုဖြစ်နေတော့မျက်လုံးကိုပြူးပြဲဖွင့်ကြည့်မိတယ်… ခုတင်ခြေရင်းမှာ ဆံပင်ခါးလောက်နဲ့အဖြူရောင်ဝတ်ထားတဲ့မိန်းခလေးတယောက် ကျောပေးပြီးပုဆိုးပေါ်ဖိထိုင်နေတာကို အဲကွန်းက Temperature LED Display မီးရောင်လေးနဲ့မြင်နေရသည်။ ထူးဆန်းသည်မှာ ဒီလိုအချိန် ဒီလိုနေရာမှာ တခါမှာမထင်ထားသည်ကိုမြင်လိုက်ရသော်လဲကြောက်စိတ်စိုးစဉ်းစမျှရှိမနေခြင်းဖြစ်သည်။ မိန်းခလေးခေါင်းလေးလှည့်လာတော့နှာတန်ချွန်ချွန်လေးနှင့် တော်တော်ကိုမြင်ရခဲ့သည့်ချောမောလှပသော်မျက်နှာပိုင်ရှင်လေးဖြစ်နေသည်။ မှင်တက်ပြီး ဘာမှမပြောနိုင်ခင်မှာပင် သူမထံမှ ချိုသာသောအသံလေးနှင့် …. “ပုဆိုးပြန်ဝတ်တော့မလို့လားကိုရယ်….” ဟုမေးလိုက်သည်။
ခေါင်းညိမ့်မိလား ခေါင်းခါမိသည် လားတောင်မသိလိုက်ခင်မှာ သူမကမ်းပေးလာသော ဖြူလွ နူးညံ့နေသော်လက်ကလေးကိုဆွဲယူလိုက်ရင်း လက်တဖက်ကလဲသွေးသွယ်သောခါးလေးကိုဖက်ကာရင်ခွင်ထဲကိုအပ်ထားလိုက်မိသည်။ ရင်ခွင်ထက်ကနေမော့ကြည့်လာတဲ့မျက်ဝန်းတွေမှာ စိုလဲ့နေပြီးတခုခုကို ပြောနေသလိုဖြစ်နေကာ အကာအကွယ်မရှိသောညီလေးမှာလဲ ချက်ချင်းပင် ထောင်မတ်လာလေတော့သည်။ ဘာမှပင်မပြောတော့ပဲသေးငယ်သောနုတ်ခမ်းဖူးဖူး လေးကို တရှိုက်မက်မက် နမ်းရှုံ့မိလိုက်တော့ သူမကလဲအလိုက်သင့်လေး ပြန်လည်နမ်းရှုံ့ကာ နှစ်ဦးသားအသက်ရှူသံတွေပြင်းပြလာကြသည်။ သူမကိုထိုင်ရက်အနေအထားမှ အားမလိုအားမရဖြစ်ကာ တဇောင်းဆွဲလှည့်ရင်း အငမ်းမရနမ်းရှိူက်နေမိသည်။ ဒီလိုအထိအတွေ့တွေမတွေ့ရတာကြာပြီဆိုတော့ အရမ်းကိုဆာလောင်မွတ်သိပ်နေမိပြီလေ။ လက်တဖက်ကလဲ အလိုလို သူ့ရဲ့နို့လေးတွေကို ကိုင်မိလိုက်တော့။
အောက်ခံဘာမှမဝတ်ထားပဲ နို့လေးတွေကမသေးလွန်းမကြီးလွန်းပဲ အလွန်ပင်တင်းတင်းရင်းရင်းနဲ့ ရှိနေတာကြောင့်စိတ်ပိုကြွလာကာ နို့သီးလေးတွေကို ပွတ်ခြေပေးနေမိသည်။ ခုတင်အလယ်နားဆီသို့ဆွဲယူပြီးနို့လေးတွေကိုလျှာလေးနှင့်တို့လိုက် နုတ်ခမ်း၂ခုကြား ရွရွလေး စုတ်ပေးလိုက်နှင့်သူ့အသက်ရှူသံတွေမြန်လာတဲ့အချိန်မှာပဲ ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ကိုတွန်းလှဲကသူကအပေါ်စီးကနေခွပြီးမျက်နှာအနှံ့ကိုနမ်းရင်းတရွေ့ရွေ့နှင့်အောက်ဘက်သို့ဆင်းသွားသည်။ ကျွန်တော်လဲ အလွန်အမင်းကို သက်တောင့်သက်သာနှင့်သာယာနေမိသည်။ ထိုမှတဆင့်ကျွန်တော့်ညီလေးကိုအရင်းမှကိုင်က ဥနှစ်လုံးနှင့်ပေါင်ကြားအနှံ့ကို နှာခေါင်းလေးနှင့်ပွတ်သတ်နေသောအခါ ကျွန်တော်ခါးပင် ကော့တက်သွားလောက်ရအောင်ခံစားမှူကောင်းလှသည်။ ဆတ်ကနဲ ညီလေးကိုပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်သောအခါတွင် ကျွန်တော်ပါးစပ်မှအသံပင်ထွက်သွားမိသည်။
သူမ ခေါင်းလေးကိုမော့လာပြီး …. “နာသွားလား … ကို “ ဟုမေးလိုက်သောအခါ ခေါင်းကိုပင်တွင်တွင်ခါမိလိုက်သည်။ တချက်ပြုံးကာ ညီလေးကိုအားရပါးရနုတ်ခမ်းတစုံအကြား လျှာအနေအထားကပါညီလေးထိပ်ဖူးကို ပါးစပ်ထဲမှာအသွင်းအထုတ်လုပ်ကာ ကစားပေးနေသောအခါ ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမနေနိုင်ပဲ ခေါင်းကိုလှမ်းကိုင်ကာ ပါးစပ်ထဲတွင်ပင် အချစ်ရည်များကို အားရပါးရထုတ်လွတ်လိုက်သည်။ ထုတ်လွတ်ပြီးလို့ တဆတ်ဆတ်တုန်အောင် ကောင်းသွားသောကျွန်တော့ရဲ့ညီလေးကိုပါးစပ်မှမချွတ်သေးပဲအရင်းထိစုတ်ကာ အချစ်ရည်များကိုကုန်စင်အောင် ဆွဲစုတ်ပေးနေသောသူ့ကိုကြည့်ကာအလွန်အမင်းအားနာမိလိုက်သည်။ “အချစ်လေးရယ် အားနာလိုက်တာ…” “ရပါတယ်ကိုရယ်… ချစ်လေးကိုလုပ်မပေးနိုင်တော့ဘူးမဟုတ်လား?” “ခဏစောင့်လိုက်ရင်ရမှာပေါ့ချစ်လေးရယ်” “စောင့်ဖို့အချိန်မရတော့ဘူးကိုရဲ့” “ချစ်လေးကဘယ်ကရောက်လာတာလဲဟင်?” ။
“ကို့ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထွက်ကြလာတဲ့အချစ်ရည်လေးတွေက ချစ်လေးရဲ့စိတ်ကို ဒီကိုရောက်လာဖို့ဆွဲဆောင်လိုက်ကြလို့ပါ” “ ဘယ်ကလဲတော့မေးမနေပါနဲ့ကိုရယ် “ “ကို့ကိုအရမ်းချစ်တယ်” ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ အငွေ့လို့ဖြစ်ပြီးသူမပျောက်သွားတယ်။ “ ချစ်လေး “ ဟုပါးစပ်မှယောင်ရမ်းမိလိုက်သေးလားတောင်မသိ။ ခွထားသောခေါင်းဦးမှာ စိုစိုစိစိ နှင့်သုတ်ရည်များပေနေတော့သည်။ ကာမစိတ်ပဲအရမ်းစွဲလမ်းမိလေသလားတော့မသိတော့ပြီ။ သို့ပေမဲ့ခံစားမှူလေးကိုတသိမ့်သိမ့်နှင့်ပြန်တွေးရင်း စိတ်ထဲတွင်ရေရွတ်မိသည်မှာ…. ”နောက်တခါပြန်တွေ့ခွင့်ပေးပါဦး ချစ်လေး ရယ် “ လို့… မနက်နေမြင့်နေသည်ကိုသိသော်လဲမထသေးပဲဆက်ခွေနေမိသည်။ ညကပင်ပန်းသွားသည်ကိုး။ တဒေါက်ဒေါက်တခါးခေါက်သံကြားတော့ ဘေးမှပြစ်ချထားတဲ့ခွအုံးကို ခြေရင်းကအဝတ်လှမ်းတဲ့စင်ပေါ်လှမ်းတင်လိုက်ရင်းပုဆိုးကိုသေချာပြန်ဝတ်ကာ တခါးကိုဖွင့်လိုက်တော့…။
“ ကိုလင်း အိပ်ပုတ်ကြီးလိုက်တာ ခုထိမထသေးဘူး “ ဆိုတဲ့အသံစွာစွာနဲ့ ညီမလေးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ “နင်ဘယ်တုန်းကပြန်ရောက်လဲ” လို့မေးလိုက်ရင် အပြင်ထွက် ဆက်တီပေါ်ထိုင်ချရင်းသူနဲ့ပါလာတဲ့သူ့အစ်ကို ကျွန်တော့ညီနဲ့စကားစမြည်ပြောကြတယ်။ ညီနဲ့ညီမနဲ့က အင်္ဂလန်မှာကျောင်းသွားတက်နေကြတာ တော်တော်ကြာပြီလေ။ ပြန်ရောက်လာတာ၁ပါတ်ကျော်နေပြီတဲ့… ဖုန်းမဆက်ပဲတခါထဲအိမ်လာလည်တာ လို့ပြောရင်းမျက်နှာတောင်မသစ်ဖြစ်ပဲ စကားလက်ဆုံကြနေမိသည်။ သူ့တို့အဖေက ကျွန်တော့်အဖေရဲ့ညီတဝမ်းကွဲလေ။ သူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့က၂၀မ်းကွဲတာပေါ့။ သူငယ်ချင်းတွေလိုပဲပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ ညီမအသက်က ၂၀ စွန်းစွန်းပဲရှိဦးမယ်။ တိုင်းတပါးကိုထွက်သွားကြတုန်းကကောင်မလေးက အပျိုဝင်ကာစလေးပဲရှိသေးတာ။ ခုတော့ တသွေးတမွေးနဲ့ လှပနေတာ…. ကိုယ်တောင် ဂလု လိုက်မိသေးတယ်။ မီနီစကပ်လေးနဲ့တစ်တစ်ရစ်ရစ်လေးထွက်နေတဲ့တင်ပါးလေးရယ်….. ။
ခပ်ဟိုက်ဟိုက်ဖြစ်နေတဲ့ ဖွံဖွံထွားထွားရင်အစုံက ကျွန်တော့်စိတ်တွေကိုဆွဲဆောင်နေလေရဲ့…. စိတ်လျော့ပြီး ထိုင်ကြဦး လို့ပြောကာ မျက်နှာသစ်သွားတိုက်လုပ်လိုက်တယ်။ ဟိုကိစ္စ ဒီကိစ္စ သောင်းပြောင်းထွေလာပြောအပီးမှာ ညီက … “ကိုလင်း တခါထဲလိုက်ခဲ့လေ” “မတွေ့တာလဲကြာပြီ… ညကျအိမ်မှာ အိပ်… ပါးပါးလေးသောက်ကြတာပေါ့” အိုကေ ပေါ့… အဝတ်အစားထလဲပြီးသူတို့အိမ်လိုက်သွားလိုက်တယ်။ အိမ်မှာပဲတနေကုန်ထမင်းစားလိုက် ပေါက်ကရပြောလိုက်နဲ့ညီမလေးကလဲကလေးလိုပဲအနားတကပ်ကပ်နဲ့ချွဲနေပေမဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ သာယာနေမိတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေရိုက်ကြတော့လဲ ညီမလေးက ခါးကိုနောက်ကနေဖက်ပြီး အရိုက်ခံတော့သူ့နို့ထွားထွားလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော့ကျောနဲ့လက်မောင်းမှ လာလာထိနေတယ်။ တော်သေးတာပေါ့အတွင်းခံဘောင်းဘီနဲ့ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်ထားမိပေလို့…. သူတို့အိမ်က ကုန်းအဆင်းလေးမှာဆောက်ထားတဲ့ဘိုဆန်ဆန် ၃ထပ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အိမ်လေး။
ဝင်ဝင်ခြင်းက ဧည့်ခန်း…. အောက်ဆင်းလိုက်ရင် ကားဂိုထောင်နဲ့မီးဖိုးချောင်ရယ် အိမ်သာရေချိုးခန်းနဲ့ ထမင်းစားခန်း။ အပေါ်တက်လိုက်ရင် အိပ်ခန်း၃ခန်းနဲ့အလယ်မှာရေချိုးခန်းအိမ်သာ။ အိပ်ခန်းအကြီးကိုတော့ဦးလေးလင်မယားနေတယ်။ ဒေါင့်ဆုံးအခန်းကတော့ညီတော်မောင်နေပြီး ဧည့်ခန်းနဲ့ကပ်ရပ်အခန်းမှာတော့ညီမလေးနေတယ်။ “ကိုလင်း….” ညီမလေးကချွဲပြစ်ပြစ်နဲ့ ရေချိုးပြီးကာစ ခေါင်းသုတ်ရင်းနဲ့ဘေးမှာလာထိုင်တယ်။ “ ကိုလင်း…ညီမလေးလဲသောက်မယ်နော်..…. “ သောက်ဖို့တာစူနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ညီအစ်ကို၂ယောက်ဖွင့်မဲ့ဆဲဆဲ အရက် ပုလင်းကိုမျက်စလေးလှမ်းပြစ်ရင်းနဲ့ခွင့်တောင်းတယ်။ “အေးအေး “ “အများကြီးတော့မသောက်နဲ့နော် “ လို့သတိပေးရင်ခွင့်ပေးလိုက်မိတယ်။ ဟေး ဆိုပြီး ခါးကိုလက်ဖက်တော့ လျှော်ထားပြီးခါစခေါင်းလျှော်ရည်နံ့လေး ရဲ့စွဲဆောင်မှူနဲ့ သူ့ကိုယ်ခါးလေးကိုယောင်ပြီးပြန်ဖက်မိတယ်။
အမြည်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ဖင်တုံတုံလေးကိုခါပြီး အောက်ထပ်ကိုဆင်းသွား တော့ ရင်အစုံဖိုလှိုက်ပြီး ကျန်ခဲ့တာပေါ့….. ဒီလိုနဲ့ပဲသောက်တဲ့ဇာတ်လမ်းစကြတာပေါ့။ သောက်လိုက်ကြစကားပြောလိုက်ကြနဲ့… ညီတော်မောင်ကလဲသူ့စော်အကြောင်းတွေပြော… ကိုယ်ကလဲပြတ်သွားတဲ့ကိုယ့်စော်အကြောင်းတွေပြောနဲ့… ဦးလေးကတော့တခွက်လောက်ဝင်သောက်ပြီး သွေးတိုးလို့ဆိုကာ ၁၀နာရီလောက်ထဲကတက်အိပ်နေပါတော့တယ်။ အဒေါ်ကလဲ အမြည်းလုပ်ပေးရင်းနဲ့ ၁၁ လောက်ကတက်သွားတော့ မောင်နှမ ၃ယောက်ပဲကျန်တော့တာပေါ့။ ၁လီတာပုလင်းကလဲကုန်သလောက်ဖြစ်နေတော့ ညီမလေးကကိုယ်တွေလောက်မသောက်ပေမဲ့ မူးတော့မူးနေကြပြီ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ၁၂ ထိုးလို့အိပ်ကြရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဧည့်ခန်းမှာပဲအိပ်ပါ့မယ်ဆိုတာကို ညီမလေးက သူက ဒက်ဒီ နဲ့မာမီတို့နဲ့သွားအိပ်မယ် ညီမလေးအခန်းမှာ ကိုလင်းအိပ်ပါဆိုပြီး သူ့ပစ္စည်းလေးတွေတက်သိမ်းစည်း ပေးပြီး ရပီလို့လှမ်းပြောရင်း သူ့အဖေနဲ့အမေခန်းထဲဝင်သွားလေရဲ့။
ကိုယ်တွေလဲကောင်းနေပြီဆိုတော့ဂွတ်နိုက်လုပ်ရင်းကိုယ်စီအခန်းထဲဝင်ကြတာပေါ့။ အခန်းထဲရောက်တော့ အဲကွန်းပါဖွင့်ပေးထားလို့ကျေးဇူးတင်လိုက်မိသေးတယ်။ မွေ့ယာက ၈လက်မအထူကိုခုတင်မထားပဲကြမ်းပေါ်မှာခင်းထားတယ် ခြေရင်းမှာက အဝတ်လှမ်းတဲ့စင်လေး… ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာကဘီဒို။ စင်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့အတွင်းခံလေးတွေတင်ထားတယ်။ အိပ်တဲ့အပေါ်မှာဖြစ်နေပေမဲ့အယူမရှိတော့ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူး။ အတွင်းခံလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့ထယူကြည့်လိုက်မိတယ်။ အလက်စတစ်မပါတဲ့အသားကပ်အတွင်းခံကနုတ်လေးတွေနဲ့…. ဘရာလေးကိုကိုင်ကြည့်ပြီး ရူကြည့်လိုက်တယ်… စိတ်တွေဘယ်လိုကြွလာမှန်းကိုမသိတော့ဘူး.. ညီတော်မောင်လေးကမတ်လာတယ်။ ပင်တီလေးပါရူကြည့်တော့မွေးတေးတေးလေးနဲ့ ….. အသက်ရူသံတွေမြန်လာတယ်…. လီးကတောင်နေပြန်ပြီဗျာ…. တကိုယ်လုံးချွတ်ပြီးစိမ်ပြေနပြေ အာသာဖြေမယ်ဆိုတဲ့အတွေးပေါက်လိုက်မိတာနဲ့ချွတ်လိုက်တယ်။
ဘရာပန်းရောင်လေးရယ်… ပင်တီအမဲလေးရယ်ကိုယူ မီးပိတ် ပြီးခုတင်ပေါ်မှာပက်လက်လှဲချလိုက်တယ်။ ဘရာလေးတလှည့်ပင်တီလေးတလှည့်နဲ့နမ်းရင်း ပင်တီလေးကိုဝတ်ကြည့်လိုက်တယ်… သူ့အဖုတ်နဲ့ထိထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော့်လီးနဲ့ထိနေပါလားဆိုတဲ့အသိနဲ့လီးက သူ့ပင်တီလေးကြားထဲကနေထောင်မတ်ပြီးထိုးထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်… ပင်တီလေးကိုပြန်ချွတ်ပြီးလီးနဲ့ပွတ်ပြီးဂွင်းထုနေတုန်းမှာ…. လော့ခ်ချဖို့မေ့သွားတဲ့တခါးက ကလစ်ဆိုပြီးပွင့်လာတယ်….။ ဟာ…… သေပြီလို့…. မြင်ယောင်ကြည့်လေ… ဘရာနဲ့ပင်တီနဲ့ တောင်မတ်နေတဲ့လီးကြီးနဲ့… သွားပြီလို့ ထင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဝင်လာတဲ့သူကိုကြည့်လိုက်တော့ညီမလေးဖြစ်နေတယ်။ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့…. ထင်တာတော့ရူးထပေါက်ပြီးသူနေနေကြအခန်းထဲကိုပဲယောင်ပြီးပြန်ဝင်လာတယ်ထင်ပါတယ်။ ကြည့်လိုက်တော့မျက်လုံးကမပွင့်ဘူး… ညီမလေးကခုတင်ပေါ်ကို လှဲချလိုက်တယ်… ဒူးလေးကွေးပြီးအိပ်သွားတယ်…။
ကျွန်တော်ရှိနေတာကိုသူမသိသေးဘူး… သောက်လဲသောက်ထားတော့ ယောင်ယောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေသလိုပဲ… ကျွန်တော်ကလဲ နံရံဘက်ကိုကပ်နေတာဆိုတော့… သူနဲ့မထိမိသေးဘူး… သူ့ကိုနှိုးပြီးပြောဖို့ကလဲ ချွတ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီနဲ့အကျီပေါ်မှာသူက ဖိအိပ်နေတာ… ဆွဲယူလို့နိုးသွားရင်လဲ လီးကြီးတောင်ပြီး ဘရာနဲ့ပင်တီ နဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုရှင်းရမလဲမသိတော့ဘူး။ အသက်တောင်၀၀မရှူရဲပဲငြိမ်ငြိမ်လေး ပဲဆက်လှဲနေပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုကျောပေးပီးခွေခွေလေးအိပ်နေတဲ့ညဝတ်အကျီအောက်ကနေကားထွက်နေတဲ့ဖင်လုံးလေးကအရမ်းလှနေတယ်…. လီးကြီးကတောင်မြဲတောင်နေဆဲကနေပိုတောင် မာကြောလာသလိုပဲ…. လည်ချောင်းတွေတောင်ခြောက်လာသလိုပဲ… ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာလဲစဉ်းစားလို့မရတဲ့တူတူတော့… ညီမလေးပုခုံးလေးကိုဖွဖွလေးကိုင်ပြီး လည်ဂုတ်လေးကိုနုတ်ခမ်းလေးနဲ့ယွယွလေးလိုက်နမ်းမိတယ်… နမ်းနေရင်းကညီမလေးနားကိုကပ်လိုက်တော့သူ့ဖင်လုံးလေးကိုလီးနဲ့ထောက်လိုက်မိတယ်…။
အောက်ဘက်ကိုနဲနဲရွေ့ပြီး ဖင်အကွဲကြောင်းလေး နားကိုလီးနဲ့ပွတ်ဆွဲနေရင်းလည်ပင်းဘေးလေးတွေကိုနမ်းလိုက်တော့သူနိုးလာတယ်… ရုတ်တရက်ဒီဘက်ကိုခေါင်းဆတ်ကနဲလှည့်လာတော့…. “ဟင်….. ကိုလင်း… “ “ ဘယ်လိုရောက်နေတာလဲ” လို့မေးရင်းသူ့မျက်လုံးကအဝတ်မပါပဲတောင်မတ်နေတဲ့လီးကြီးဆီပါမျက်လုံးရောက်သွားတယ်။ “ညီမလေး ဝင်လာတာညီမလေးရဲ့ “ လို့ခပ်တိုးတိုးဖြေလိုက်ရင်းလက်ထောက်ပြီးမတ်တတ်ထဖို့ကြိုးစားနဲ့တဲ့သူ့ကိုဆွဲလှဲလိုက်မိတယ်။ နုတ်ခမ်းလေးကိုလဲ အငမ်းမရ ဆွဲစုပ်ပြီးအနမ်းပွင့်တွေချွေလိုက်ရင်း …. ကိုလင်းမနေနိုင်တော့ဘူးညီမလေးရယ်…. လို့ပြောပြီး တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖက်ထားလိုက်တယ်… “ကိုလင်းက ဆိုးလိုက်တာ” လို့ခပ်တိုးတိုးလေးပြောလိုက်တဲ့ညီမလေးကိုအရမ်းချစ်မိသွားတယ်… နမ်းနေရင်းနဲ့ ညဝတ်အကျီပေါ်ကနေချွန်ထွက်နေတဲ့နို့လေးတွေကိုဆုတ်ချေလိုက်ရင် နို့သီးသေးသေးလေးတွေကို ပွတ်ပေးလိုက်တော့ ညီမလေးဆီကငြီးသံသဲသဲလေးထွက်လာတယ်။
“ချစ်လိုက်တာညီမလေးရယ် “ လို့ နားလေးတွေကိုလျှာဖျားလေးနဲ့ယွယွလေး ထိုးစွရင်းပြောလိုက်မိတယ်.. ။ မသင့်လျော်ပေမဲ့… နိုးကြွနေတဲ့ကာမစိတ်ကိုလွန်ဆန်လို့မရတဲ့အဆုံး….. အကျီလေးကိုအပေါ်ကိုမပြီးဆွဲချွတ်လိုက်တော့ ညီမလေးကလက်၂ချောင်းကိုအလိုက်သင့်မပေးတယ်.. လည်ပင်းလေးကိုနမ်းရင်း လက်တဖက်ကလဲညီမလေးနဲ့နို့ထွားထွားလေးတွေကိုပွတ်သပ်နေရင်းနဲ့ နို့သီးသေးသေးလေးကိုလျှာလေးနဲ့တို့နုတ်ခမ်းလေးနဲ့စုပ်ပေးလိုက်တော့ညီမလေးခါးလေးကော့သွားတယ်။ နို့သီးလေးတွေကိုနုတ်ခမ်းလေးနဲ့စုပ်ပေးနေရင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ရင်ဘတ်ကိုဖိတိုးပြီးလှဲခိုင်းလိုက်ရင်း… လက်တဖက်က ညီမလေးရဲ့ ညဝတ်ဘောင်းဘီ စပန့်သားလေးအပေါ်ကနေ အဖုတ်လေးကိုပွတ်ပေးလိုက်တော့ ငြီးသံလေးတွေကိုကျယ်လာတယ်…. ညီမလေးဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်လိုက်တော့အမွေးမရှိတဲ့ညီမလေးရဲ့ဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်နေတဲ့ညီမလေးရဲ့အဖုတ်နုနုလေးကိုအားမလိုအားမရနဲ့လက်နဲ့ပွတ်သပ်နေရင်းနဲ့။
အပေါက်ဝလေးကိုလက်ခလယ်လေးနဲ့တို့လိုက်တော့….. အို….. ညီမလေး ရွဲရွဲကိုစိုနေပါရောလား…. ဗိုက်သားလေးတွေကိုနမ်းနေရင်းကနေ အောက်ကိုဆင်းပြီး အဖုတ်တဝိုက်ကို နုတ်ခမ်းလေးနဲ့လျှာလေးနဲ့တလှည့်ဆီတို့ထိပေးတော့ညီမလေးကကျွန်တော့လက်တက်ကိုလက်ဝါးဆုတ်ကိုင်ထားတယ်…. ကျွန်တော်သိလိုက်တယ်… ညီမလေးအရမ်းဖီးလ်တက်နေပြီ… ကျွန်တော့လီးဆီကိုလက်ကိုဆွဲယူပြီးပေးကိုင်လိုက်တယ်…အစွမ်းကုန်ထောင်မတ်နေတဲ့လီးကြီးကိုကိုင်မိလိုက်တော့တချက်တွန့်သွားပြီး မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တယ်… “ အကြီးကြီးပဲ ကိုလင်းရယ် “ တဲ့ ရှက်နေတဲ့ပုံလေးကလဲအသည်းစွဲလောက်အောင်ချစ်ဖို့ကောင်းနေလေရဲ့… ညီမလေးရဲ့ အဖုတ်လှလှလေးဆီခေါင်းပြန်ဆင်းရင်း အစိလေးကိုလျှာထိပ်လေးနဲ့ထိုးရင်း နုတ်ခမ်း၂ခုကြား ဆွဲစုပ်လိုက်တော့ညီမလေးငြီးသံရှည်ကြီးနဲ့ကော့သွားတယ်….။ လက်ကလဲကျွန်တော့လီးကြီးကိုညှစ်လိုက် အထက်အောက်ဂွင်းတိုက်လိုက်နဲ့…..။
ကျွန်တော်နေရာပြောင်းပြီးတကိုယ်လုံးကိုသူ့ပေါင်ကြားမှာနေရာယူလိုက်တယ်… ပေါင်၂ချောင်းကိုမြှောက်ပြီး အဖုတ်အမြှောင်းလေးတလျှောက်နဲ့ဖင်ပေါက်လေးကိုပါလျှာနဲ့အထက်အောက်ကောင်းကောင်းကြီးကစားလိုက်တော့ညီမလေးရဲ့အဖုတ်ထဲကနေအရည်လေးတွေဆိုတာရွဲနေတာပဲ…. ဒီလောက်ဆိုတော်ပြီဆိုပြီး ကျွန်တော်ဒူးထောက်နေရာယူပြီးလှေကြီးထိုးပုံစံနဲ့ပဲ လီးကြီးကိုအဖုတ်ဝမှာတေ့ရင်အစိလေးနဲ့လီးထိပ်နဲ့ပွတ်ပေးလိုက်တော့ညီမလေးကကျွန်တော့ခါးကို ဆွဲယူတယ်… ညီမလေး အရမ်းလိုချင်နေပြီလေ… အလိုကတသိပဲ လီးကြီးကိုညီမလေးအဖုတ်လေးထဲ တေ့ပြီးထိုးသွင်းလိုက်တော့ထစ်ထစ် ထစ်ထစ်နဲ့ ဒစ်ကြီးမြုတ်လောက်အောင်ဝင်သွားတော့ညီမလေးက “ဖြေးဖြေး… နာတယ် ကိုလင်းရဲ့”ဆိုပြီးတိုးတိုးလေးပြောရှာတယ်… အသွင်းအထုတ်လေးနည်းနည်းလုပ်ရင်းချော့ချော့ပြီးသွင်းလိုက်တယ်… တဆုံးထိလဲဝင်သွားရော ညီမလေးဆီက “ အ…. အ …. အ” ဆိုတဲ့အသံလေးတွေထွက်လာတယ်…။
နို့လေးတွေကိုလက်ကပွတ်သပ်ရင်းညီမလေးနုတ်ခမ်းလေးတွေကိုဆွဲစုပ်လိုက်တော့ အငမ်းမရပြန်နမ်းရင်းခါးလေးကိုစည်းချက်မှန်မှန်လေးနဲ့ကော့ပေးတော့ကျွန်တော်လဲအရှိန်လေးတင်ပြီးခပ်သွက်သွက်လေးဆောင့်လိုက်တော့ .. “ပလွတ် …ဖတ် ….ပလွတ်… ဖတ်… နဲ့ရွဲရွဲစိုနေတဲ့ ညီမလေးရဲ့အဖုတ်လေးဆီကနေအသံလေးတွေထွက်လာတယ်…. ခါးကိုလာကိုင်ထားတဲ့ညီမလေးလက်တွေလျော့ကြသွားရင်းတချက်ညိမ်ကြသွားတဲ့ညီမလေး ပြီးသွားပြီဆိုတာသိလိုက်တယ်…။ “ညီမလေးပြီးသွားပြီလား “ လို့မေးလိုက်တော့ရှက်ရှက်နဲ့” ဘာတွေလာမေးမှန်းမသိဘူး…သွား “ဆိုပြီးဆူဆူအောင့်အောင့်ပုံလေးကအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ညီမလေးရယ်… လှေကြီးထိုးပုံစံနဲ့၁၀မိနစ်လောက် အရှိန်တင်လိုက် ပုံမှန်လေးလုပ်လိုက် လုပ်နေရာကနေလီးကိုမချွတ်ပဲပေါင်၂ချောင်းကိုဆွဲမြှောက်ပြီးဘေးတဇောင်း ပုဇွန်တုပ်ကွေးလေးနဲ့ စပိခပ်များများနဲ့လုပ်ပေးနေရင်းနဲ့ညီမလေးဆီကအသံလေးတွေထပ်ထွက်လာတယ်…။
“တူတူ ပြီးမယ်နော် “လို့ပြောလိုက်တော့ခေါင်းငြိမ့်ပြတယ်… ဖင်လုံးလေးကိုဆွဲမြှောက်ပြီး ဒေါ့ကီစတိုင်ပြောင်းလိုက်ရင်းနဲ့ခါးလေးကိုကိုင်ပြီးခပ်သွက်သွက်ဆောင့်နေရင်းကနေ သူ့အဖုတ်လေးကနေညှစ်နေတာခံစားလိုက်ရတယ်… ပြီးလိုက်တော့မယ်ညီမလေးရယ်လို့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ အားရပါးရ တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ဆောင့်လိုက်ရင်း ဆွဲထုတ်ပြီး ညီမလေးရဲ့ဖင်လှလှလေးပေါ်မှာ ငွေရောင်လွမ်းတဲ့အချစ်ရေ ဖြူဖြူလေးတွေကို ပန်းထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်…..ညီမလေးကိုမှောက်ယက်ခွပြီးအပေါ်ကနေဖိထားရင်…. ချစ်လိုက်တာညီမလေးရယ်လို့တိုးတိုးလေးပြောလိုက်မိတယ်….. ဒီလိုနဲ့ပဲ သာယာမှူတွေအဆုံးစွန်ထိ ခံစားလိုက်ကြပြီးတော့….. မောင်နှမ၂ယောက်တိုးတိုးတိတ်တိတ်စကားမမြည်လေးတွေပြောနေမိကြတယ်။ “ငယ်ငယ်တုန်းက ညီမလေး ဟာလေးကို ကိုလင်း မမြင်ဘူးလို့ချွတ်ပြခိုင်းတာမှတ်မိလား?” “မှတ်မိတာပေါ့ကိုလင်းရယ်” “အဲဒီတုန်းထဲက ညီမလေးဟာလေးကိုစွဲလမ်းမိနေတာ…. သိလား “ ။
“ဟုတ်လို့လား ညီမလေးလဲကိုလင်းပြတဲ့ လက်တောက်လေးကိုခုထိမြင်ယောင်တုန်း” ဆိုပြီးရှက်ရယ် လေး ရယ်နေလေရဲ့။ ပြီးတော့…… “ ခုကြတော့သူ့ဟာကြီးကနည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူး …. ဟွန်း”။ ကျွန်တော်ပြုံးရုံလေးပဲပြုံးပြီး ညီမလေး ကိုမေးလိုက်မိတယ်။ “ညီမလေးမှာရည်းစားရှိတယ်မဟုတ်လား? သူနဲ့ရောလုပ်ဖြစ်ကြလား” ညီမလေး: “ ရှိတယ်ကိုလင်းရဲ့…. ဒါပေမဲ့သူနဲ့ကအင်္ဂလန်မှာတမြို့ထဲမဟုတ်တော့၂လတခါလောက်ပဲတွေ့ကြရတာ” နည်းနည်းတော့အားနာသွားမိပေမဲ့…. ဘာဖြစ်လဲဗျာ… ကိုယ့်ညီမလေးပဲကို…. ညီမလေး: “ အခန်းပြန်တော့မယ်….” ကျွန်တော်: “ အင်းပါ..ညီမလေး… ကောင်းသောညပါ” ခဏနေတော့ရေထဆေးပြီး တော့ပြန်အိပ်ဖို့ကြိုးစားရင်း ဟိုတွေးဒီတွေးနဲ့ ငယ်ဘဝလေးကိုပြန်သတိရ၊ ဘာမှန်းမသိလို့စမ်းသပ်ချင်နေကြတဲ့အရွယ်တွေကနေ ခုအရွယ်ကြတော့ ၂ယောက်လုံးက ကိုယ်စီအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပါလားလို့ တွေးနေရင်းအိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။
တဒေါက်ဒေါက်နဲ့တံခါးခေါက်သံကြားမှ ခေါင်းထဲတအုံအုံနဲ့ နိုးလာပြီး သေသေသပ်သပ်ဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်နည်းနည်းပြုပြင်လိုက်ပြီးထဖွင့်လိုက်တော့….. “ သားရေ… ဈေးသွားမလို့၊ နင့်ဦးလေးကလဲ သွေးတိုးနေလို့၊ ဈေးလိုက်ပို့ပေးပါဦးသားရယ်” “ ဟုတ်… မျက်နှာသစ်အိမ်သာတက်ပြီးရင်သွားမယ်လေ” ဈေးကပြန်လာတော့လဲချက်ပြီးပြုတ်ပြီးစားပြီးမှပြန်ဆိုလို့ယောင်ပေယောင်ပေလုပ်နေတာပေါ့။ ညီမလေးကတော့နိုးပြီးတော့ရေတောင်ချိုးပြီးနေပြီ။ ညတုန်းကမူးနေကြတော့သိပ်မသာဘူး မနက်မျက်နှာချင်းဆိုင်တော့ ဖိန်းတိမ်းရှိန်းတိမ်း တွေဖြစ်နေကြပေမဲ့ ဘာမှမဖြစ်သလိုဟန်ဆောင်နေကြရတာပေါ့။ “ ကိုလင်း ဒီနေ့သွားစရာရှိသေးလား? “ ကျွန်တော်: “ မရှိဘူးညီမလေး ဘာလို့လဲ? “ “ မရှိရင် လေဆိပ်လိုက်ပို့ပေးပါလား? ကျောင်းတူတူတက်နေတဲ့သူငယ်ချင်းကိုသွားကြိုပေးရမှာ၊ သူက မန်းလေး ကဆိုတော့ဒီမှာတရက်နေပြီးမှ မန်းလေးကိုပြန်မှာ။
အေးအေး… ရပါတယ်… “ ဒါဆိုထမင်းစားပြီးရင်သွားကြမယ် “ “ အိုကေ “ ဒီလိုနဲ့သွားကြိုကြတော့ သူရယ်ကျွန်တော်ရယ်၂ယောက်ထဲရှိတုန်း ညကကိစ္စကိုအစဖော်ကြည့်တော့ ညီမလေး ရှက်နေတာကချစ်စရာလေး၊ ကားမောင်းရင်းနဲ့တောင် စိတ်ကပါလာတော့ ညီလေးကမာန်ဖီနေတာကိုညီမလေးကိုပြောပြလိုက်တော့ ညီလေးဆီကိုမျက်စောင်းလေးထိုးကြည့်ရင်း ရင်ဖိုသွားပုံရတယ်။ “ တော်တော်ဆိုးတဲ့ကိုလင်း “ ဆိုတဲ့စကားသံလေးကအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းသွားမိတယ်။ လေဆိပ်ရောက်ပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲသူ့သူငယ်ချင်း လေယဉ်ဆိုက်တော့ အပေါက်ဝမှသွားစောင့်နေကြသည်။ “ ဟိုမှာ လာပြီ “ ဆိုလို့သူလက်ညှိးထိုးရာကြည့်လိုက်တော့….. အာပါး…. တော်တော်ကိုလှတဲ့ကောင်မလေးပဲ လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ချက်ချလိုက်မိသည်။ ညီမလေးနဲ့ ပွေ့ဖက်နုတ်ဆက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ချိန်မှာ ကျွန်တော်လဲအိနြေ္ဒမပျက်အောင်သတိကြီးစွာဆွဲ ရင်း သူ့ရဲ့ရှုိက်ကြီးဖိုငင် အပေါ်တပိုင်းဖော်ထားတဲ့ နို့ထွားထွားလေးကိုမျက်စိကစားနေမိသည်။
သူလေးနံမည်က “ မိုး “ တဲ့….. အထုတ်တွေဝိုင်းကူဆွဲကားပေါ်တင်ပြီး အိမ်ပြန်လာကြတော့ သူတို့၂ယောက်ကတော့နောက်ခန်းမှာစကားတွေဖောင်ဖွဲ့ရင်းတဟီးဟီး တဟားဟားပေါ့။ အိမ်ရောက်တော့ညနေစောင်းပါရောလား…. အမောပန်းဖြေပြီး ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ညီမလေးက ညနဲနဲမိုးချုပ်မှပြန်ဆိုလို့ ဖင် ကျောက်ချ ထားလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်မိသည်။ ညီမလေးနဲ့လဲမခွဲချင်သေးဘူးရယ်…. ညကြတော့ညီတော်မောင်ကသူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နိုက်အောက် ဆိုပြီး လိုက်ခဲ့လုပ်နေတော့ ညီမလေးက အဖော်မရှိဘူးခေါ်မသွားနဲ့ကိုလင်း ဆိုလို့ ညီတော်မောင်လဲ လစ် သွားတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲည ကြတော့သူ့သူငယ်ချင်း “ မိုး “ ပါလာတဲ့ ပုလင်းလေးကိုဖွင့်ရင်း သောက်ကြတာပေါ့။ ပထမတော့ကောင်မလေးကကျွန်တော့်ရှေ့ဆိုရှိုးတိုးရှန့်တန့်ရယ်။ မူးလာတော့လဲ စကားတွေဖောင်ဖွဲ့မိကြသည်။ သူတို့ကအရမ်းချစ်ကြကြောင်း၊ တခန်းထဲ တခုတင် ထဲတူတူအိပ်ကြကြောင်း၊ ဘာကြောင်းညာကြောင်းတွေပြောတော့ ကျွန်တော် သိပ်မင်္ကာဘူးရယ်။
ဒီကောင်မလေးတွေ လင်ကွင်းများတီးနေရော့သလားလို့တွေးမိလိုက်သည်။ ည ၁၀ နာရီကျော်လောက်ကြတော့ ပြန်မယ် လို့မတ်တတ်ထရင်းပြောလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ကလဲယိုင်တိုင်တိုင်ရယ်။ ဦးလေးနဲ့အဒေါ်က တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေပါစေ ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ အောက်တောင်ဆင်းမလာဘူး။ ညီမလေး: “ ကိုလင်း… ပြန်မနေနဲ့တော့ဒီမှာပဲအိပ်တော့… “ ကျွန်တော်: “ ဘယ်နားအိပ်ရမတုန်းဟ “ ညီကညပြန်မအိပ်ဆိုတော့သူ့အခန်းကိုသတိရလိုက်ပေမဲ့ ညီမလေးကို မေးကြည့်လိုက်မိသည်။ ကိုကို့ အခန်းအိပ်ပေါ့ဆိုပြီး သူပြင်ထားပေးမယ်ဆိုပြီး အပေါ်တက်သွားသည်။ ခဏနေတော့မျက်နှာမသာမယာနဲ့ပြန်ဆင်းလာကာ … “ ကိုကို စိတ်ပုတ်က သူ့အခန်းကိုလော့ခ် ချသွားတယ်… သော့လဲထားမသွားဘူး “ ဟု လာပြောသည်။ “ ရပါတယ်ဟာ အိမ်ရှေ့ဆက်တီမှာပဲအိပ်လိုက်ပါ့မယ် “ လို့ပြောလိုက်ရင်းညီမလေးနဲ့ထပ်အိပ်ချင်နေသေးသည့်စိတ်ကို မနည်းချိုးနှိမ်ရင်းခေါင်းထဲကဉာဏ်နီဉာဏ်နက်တွေဆွဲထုတ်နေမိသည်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ည ၁၂ ကျော်သွားတော့ မိုး ကလဲခရီးပန်းလာတော့အိပ်ကြရအောင်ဆိုပြီး ကျွန်တော့်အတွက်ခေါင်းဦးနဲ့စောင်ပါးလေးတထည်လာပို့ပေးတော့… ညီမလေး လက်လေးကိုကိုင်ပြီး “ ဒီညတယောက်ထဲအိပ်ရမှာလား “ လို့မေးလိုက်တော့… “ အာာာာ… ကိုလင်းကလဲ “ ဆိုတဲ့စကားပြောရင်မျက်ဝန်းလေးတွေထဲမှာ ရီဝေဝေ အကြည့်လေးတွေနဲ့ပေါ့။ လက်ကလေးကိုလွတ်ပေးလိုက်ရင်း ပါးလေးကိုနမ်းလိုက်မိတယ်။ “ ချစ်လိုက်တာညီမလေးရယ် “ လို့တိုးတိုးလေးပြောလိုက်တော့ ညီမလေးကလဲ “ ကိုလင်းကိုလဲဘယ်ချစ်တဲ့အချစ်လဲတော့မသိဘူး ချစ်တယ် “ ဆိုပြီးပြေးတက်သွားတဲ့ညီမလေးရဲ့ အိုးလှလှလေးတွေကိုကြည့်ရင်းမရိုးမရွဖြစ်ကျန်ခဲ့တာပေါ့။ “ ဒုံးးးးးး” ဆိုတဲ့အသံကြားလိုက်ပြီး ခေါင်းထဲမှာထူပူသွားလို့မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ဆက်တီပေါ်ကနေလူးရင်းလှိမ့်ရင်အောက်ပြုတ်ကျတာ ခေါင်းနဲ့ စားပွဲနဲ့စောင့်မိတာဖြစ်နေတယ်။ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ခေါင်းပွတ်ရင်ထထိုင်မိတော့ညီမလေးဆင်းလာတယ်။
မီးပိတ်ထားတော့ခပ်မှောင်မှောင်လေးဖြစ်နေတာပေါ့။ “ ကိုလင်း ဘာဖြစ်တာလဲ? “ “ ပြုတ်ကျလို့ဟ “ ညီမလေးကအနားကိုသေချာလာကြည့်ပြီး “ ဘာမှမဖြစ်ဘူး… တော်သေးတာပေါ့ “ လို့ပြောရင်းနှဖူးကိုလက်လေးနဲ့ကိုင်ကြည့်နေသည်။ ညီမလေးရဲ့ကိုယ်နံ့လေးကိုရရင်ပဲ စိတ်မထိမ်းနိုင်တော့ဘူးရယ်… ဖက်ပြီးနုတ်ခမ်းလေးကို ကစ် ဆွဲလိုက် မျက်နှာအနှံ့ကိုမွတ်သိတ်ဆာလောင်မှူအပြည့်နဲ့အနမ်းပွင့်တွေချွေလိုက်မိသည်။ ညီမလေးကလဲရီဝေဝေမျက်လုံးလေးနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်းနဲ့ “ လာကိုလင်း ဒီမှာမအိပ်နဲ့တော့အခန်းထဲလိုက်အိပ်” ဆိုတော့ သိန်းတထောင်ဆုပေါက်ရင်တောင်အဲလောက်ပျော်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတွေးရင်းငေါက်ကထဲထလိုက်သွားသည်။ အခန်းတံခါးဖွင့်ပြီးအထဲလဲဝင်လိုက်ရော…. ညမီးမှိန်မှိန်အောက်မှာဘယ်လိုမှထင်မထားတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်တော့ရင်ထဲတဒုန်းဒုန်းခုန်သွားသည်။ “ မိုး “ ပေါ့….အပေါ်ပိုင်းဗလာကျင်းနဲ့ပက်လက်ကလေးလှန်နေရာက။
ဘယ်လိုမှဒီအခန်းထဲကျွန်တော်ပါမလာဘူးလို့ထင်ထားတဲ့ ကျွန်တော်ကိုလဲတွေ့လိုက်ရော ဟိုဆွဲဒီဆွဲနှင်လုံခြုံအောင်ဖုံးရင်း ပါးစပ်ကလဲဘာပြောမှန်းမသိတတွတ်တွတ်နဲ့…. ညီမလေးက….။ “ ငါ့အစ်ကို ကိုရှက်မနေပါနဲ့တော့ဟာ… ဇာတ်လမ်း လေးကိုလူစုံစုံနဲ့ပြန်စကြတာပေါ့ “ ဟုပြောရင် သူ့ပေးနားမှာထိုင်ကာ အဝတ်တွေနှင့်အကာကွယ်ယူနေသော မိုး ကို ကျွန်တော့်အလိုက်ကိုပဲသိနေတာလားမသိ…. ပြန်ဆွဲချွတ်နေသည်။ ကျွန်တော်လဲမထူးတော့ဘူး လို့တွေးရင်း ညီမလေးဘေးဝင်လှဲလိုက်မိသည်။ ညီမလေးကိုလှမ်းဖက်လိုက်တော့ခိုးလို့ခုလုနှင့်ဗိုက်နားမှာ တခုခုထောက်နေတော့စမ်းကြည့်လိုက်တာ ပန်းရောင် ဗိုက်ဘရေတာ လီးတုလေး ကို ကိုင်ကြည့်မိတော့သူတို့လဲ တခွီခွီ နှင့်ရယ်နေကြတယ်။ ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပြီ။ သူတို့ကလင်ကွင်းတီးမလို့ဇာတ်လမ်းစတုန်း အသံကြားလို့ညီမလေးကလာဆင်းကြည့်တာပဲ…ခုံပေါ်က ပြုတ်ကျမိတာကံကောင်းလိုက်တာ…။
မိုး က “ ငါမပါဘူးနော် “ ဆိုပြီး ဟိုဘက်လှဲ့ကာနံရန်နှင့်ကပ်ပြီးမသိချင်ယောင်ဆောင်နေတော့ကျွန်တော်လဲခပ်သွက်သွက်ပဲ ညီမလေးနုတ်ခမ်းလေးတွေကိုအငမ်းမရစုပ်ယူရင်း လက်တဖက်ကလဲ ညဝတ်အကျီလေးကိုချွတ်ကာ အလွန်တရာမှအိစက်ညက်ညောပြီး လုံးခဲနေသောနို့လေးတွေကို ဖွဖွလေးဆုပ်ချေနယ်ပေးလိုက်သည်။ ညီမလေးဆီက ခပ်တိုးတိုးညီးသံလေးတွေထွက်လာတော့ ညဝတ်ဘောင်းဘီအပါးလေးကိုဆွဲချွတ်ပြီး အမွေးနုနုလေးတွေကိုဖွဖွလေးပွတ်သပ်ပေးလိုက်တော့ညီမလေး ပေါင်လေး၂ချောင်း အလိုလိုကားသွားသည်။ နုတ်ခမ်းထွေးထွေးလေးတွေကိုနမ်းနေရာက လည်ပင်းဘေးလေးတွေမှတဆင့် ကာမခလုတ် ဖြစ်တဲ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိုလျှာဖျားလေးနှင့်သပ်ပေးလိုက်၊ နုတ်ခမ်းလေးနှင့်စုပ်ပေးလိုက်၊ သွားလေးနဲ့ဖွဖွလေးခြစ်လိုက်တော့ညီမလေး အသံလေးညီးရင်း ကော့တက်လာတယ်။ ညီမလေးအဖုတ်လေး အရည်လေးတွေရွဲနေပြီလေ။
နို့လေး၂လုံးကို လက်တဖက်ဆီကိုင်ရင်းနဲ့ ချပ်ချပ်ရပ်ရပ် ရှိနေတဲ့ ဗိုက်သားလေးကို နုတ်ခမ်းအစုံနဲ့ရွရွလေးပွတ်သပ်ရင်းနဲ့ ညီမလေးရဲ့အဖုတ်မွေးနုနုလေးတွေကိုနှာခေါင်းလေးနဲ့ နုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ပွတ်သပ်ပေးကာ နုတ်ခမ်းသားမရှိအဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကြားထဲက အစိလေးကိုလျှာဇောင်းလေးနဲ့ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်တော့ညီမလေး ဖင်လေးကြွတက်သွားပြီး “ အား… အ… အ… ကိုလင်းရယ် “ ဆိုတဲ့ညီးသံလေးထွက်လာတယ်။ နို့တွေကိုပွတ်သပ်နေတဲ့လက်၂ဖက်ကိုလွတ်ပြီး ပေါင်၂ချောင်းကိုအားရပါးရဆွဲထောင်လိုက်ကာ ညီမလေးရဲ့ဖင်ပေါက်လေးနဲ့ အစိ လေးကို လျှာဖျားနဲ့လွန်းထိုးလိုက်တော့ညီမလေးက “ ကိုလင်း… လုပ်ပေးတော့…ညီမလေးလိုချင်လာပြီ “ လို့လှမ်းပြောတာကိုမသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အစိလေးကို နုတ်ခမ်း၂ခုကြား ပွတ်ဆွဲလိုက်၊ လျှာနဲ့ ထိုးသွင်းလိုက်၊လျှာအပြားလိုက်နဲ့လျက်လိုက်… အားရပါးရညီမလေးအဖုတ်ကို နမ်းပြီးတော့မှ။
ဗိုက်သားလေးကနေတဆင့်နို့လေးတွေဆီပြန်နမ်းရင်းနဲ့ ညီမလေးဘေးမှာပက်လက်လှဲအိပ်လိုက်တယ်။ တဆတ်ဆတ်နဲ့တုန်ပြီးထောင်မတ်နေတဲ့ကျွန်တော်လီးကြီးကတော့ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေတာပေါ့၊ “ ကိုလင်းကိုရောမနမ်းပေးဘူးလား “ လို့မေးလိုက်တော့ညီမလေးထလာပြီး လက်နဲ့ဖွဖွလေးဂွင်းတိုက်ပေးရင်း ဆတ်ကနဲပါးစပ်ထဲ ငုံချလိုက်တာ…. ကောင်းလွန်းလို့လောကကြီးပါမေ့သွားမတတ်ပဲ…. ညီမလေးလဲအတော်ကျွမ်းကျင်သူပါလား…. ၂ယောက်သားအသက်ရှူသံတွေပြင်း၊ ပလွတ်ပလပ် နဲ့ညီမလေးပါးစပ်ထဲကို လီးကြီးကအဝင်အထွက်လုပ်နေတာကို ဘေးက မိုး ဘယ်လိုနေမလဲတောင်မစဉ်းစားမိဘူး။ သေချာတာကတော့ တယောက်ယောက်ဘေးမှာရှိတာပိုပြီးစိတ်ကိုပြင်းပြစေတယ်။ မိုး ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့ကျွန်တော့်ကို ညီမလေးက လီးကြီးကို စုပ်ပေးနေရင်းကသတိထားမိတယ်ထင်တယ်။ လက်တဖက်က မိုးရဲ့ခါးကို ကိုင်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ဆွဲလှဲ့ဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်။
မိုးကလဲ ဒီလောက်ဆိုသူစိတ်အတော်ပါနေပြီဆိုတာကျွန်တော်သိတာပေါ့…. မလှဲ့ချင်သလိုလိုနဲ့လှဲ့ပြီး “ ဘာလဲဟာ “ လို့မေးလိုက်ပေမဲ့ မျက်စိတွေက ညီမလေးစုပ်ပေးနေတဲ့လီးကြီးဆီကနေမခွာဘူး။ ညီမလေးကခေါင်းထောင်ထပြီး “ ငါ့အစ်ကိုဟာကြီးမကြိုက်ဘူးလား “ လို့ ပါးစပ်ကနေချွတ်ပြီးမေးလိုက်တော့ “ အာ “ ဆိုပြီးရှက်သွားတာလားဘာလားတော့မသိဘူးရယ်… မျက်ဝန်းတွေကတော့အရည်ကိုလဲ့နေတာပဲ။ ကျွန်တော်လဲညီမလေးဆီကသဘောတူတဲ့အရိပ်အယောင်မြင်ရတော့ ဘယ်ဘက်လက်ကို သူ့ဇက်အောင်နားလျှိုသွင်းလိုက်ပြီးညာဖက်လက်က မိုး ပုခုံးလေးကိုကျွန်တော့ဘက်ဆွဲလှဲ့လိုက်ပြီး မိုး နုတ်ခမ်းလေးတွေကို နမ်းလိုက်ပါတယ်။ မိုး မငြင်းတော့ ပုခုံးကိုင်ထားတဲ့လက်က သူ့နို့လေးတွေကို ပွတ်သပ်စုတ်နယ် ရင်းနဲ့သတိထားမိတာ ညီမလေးရဲ့နို့ထက်တော်တော်ကြီးတာပဲလို့… ညီမလေးကတော့သူ့အလုပ်သူဆက်လုပ်နေလေရဲ့။
ဒီတခါပဲခုလိုမိန်းမချောလေး၂ယောက်နဲ့တူတူနေဘူးတော့ လူကနတ်ပြည်ရောက်နေသလိုပါပဲ။ ညီမလေးရဲ့ ပလွေကျွမ်းကျင်မှူနဲ့ ဘေးနားကမိုးရဲ့ နို့လှလှကြီးတွေကိုင်ရင်း အငမ်းမရနမ်းနေတဲ့ နုတ်ခမ်းအစုံကနေထူးခြားကောင်းမွန်လွန်းတဲ့ ခံစားချက်တွေကြောင့် စစ်စစ် စစ်စစ် နဲ့နေအောင် ပြီးချင်စိတ်တွေပြင်းပြလာပါတယ်။ ပြီးသွားရင်တော့၂ယောက်၁ယောက်မနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးအထင်သေးခံရဦးမယ်။ ညီမလေးကိုဆွဲထူလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်နေရာပေးလိုက်ပြီးတော့ညီမလေးရဲ့နို့ကိုကိုင်ရင်း မိုးရဲ့နို့ကို လျှာလေးနဲ့လျက်လိုက်စုပ်လိုက်လုပ်ရင်းက မိုး ရဲ့ အဖုတ်လေးဆီလက်ရောက်သွားတော့…. သူကပြောင်နေအောင်ရှင်းထားတာပါလား လို့တွေးလိုက်ရင်း ပေါင်ကြားဆီကိုမျက်နှာရောက်သွားတယ်။ စိုရွဲနေပါရောလား မိုး ရယ်။ အစိလေးကိုလျှာလေးနဲ့လျက်လိုက်တော့” အ…. အ ….အ “ နဲ့ညီးသံလေးတွေထွက်လာပြီး အစိကိုစုပ်ပေးဆိုပြီးမိုးကပြောတော့ ကျွန်တော်တောင်အံ့သြသွားမိတယ်။
အစိလေးကိုသူ့အလိုကြစုပ်ပေးနေလိုက်တော့ဖင်လေးကကော့တက်လာရော… “ ကိုလင်း… မိုးကိုလိုးပေးပါတော့ “ “ ကိုလင်းလီးကြီးနဲ့လိုးပေးပါတော့ “ ဆိုပြီးညီးနေတယ်။ သူ့ကြည့်ရတာဒီလိုတစ်တစ်ခွခွပြောတာကြိုက်ပုံရတယ်။ “ အင်း “ ဆိုပြီး သူတို့၂ယောက်ကြားနေရာယူလိုက်တယ်…. ညီမလေးကလဲ ကိုယ်တွေလုပ်တာကိုကြည့်နေရင်းက မိုးရဲ့နို့ကို လျှာလေးနဲ့ ထိုးစွပေးနေတယ်… နေရာယူလိုက်ရင်းက “ မိုး… ကိုလင်းလီးကြီးကိုစုပ်ပေးပါဦး “လို့ပြောလိုက်တော့ ကုန်းရုံးထပြီး ပလွတ်ပလွတ်နဲ့နေအောင်ကိုမှူတ်တော့တာပဲ… ညီမလေးကလဲ ဗိုက်ဘရေတာနဲ့လီးတုက တဒီးဒီး နဲ့အသံထွက်ရင် အစိကိုပွတ်ပေးနေလေရဲ့… ဒီတခါထပ်ပြီးချင်လို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီး “ မိုးကို အရင်လိုးမယ်နော် “ လို့ခွင့်တောင်းရင်းမိုးရဲ့ပေါင်း၂ချောင်းကိုဆွဲထောင်ကာ လီးကြီးနှင့်တေ့လိုက်သည်။ ထိုးသွင်းလိုက်တော့တထစ်ထစ်နှင့်တော်တော်လေးကိုကြပ်ကြပ်စည်းစည်းရှိနေသည်။
ပေါင်၂ချောင်းကိုကိုင်ရင်း ခပ်သွက်သွက်လေးလိုးလိုက်တော့ “ အင်း… အားးး…. အ…. အ…. ကိုလင်းမြန်မြန်လိုးပေး “ “ ကောင်းလိုက်တာ ကိုလင်း လီးကြီးက အားးးး လုပ်ပေးပါကိုလင်းးး…. အားးးး “ “ နောက်ကနေလုပ်ပေးပါကိုလင်း “ လို့ညီးသံလေးနဲ့တောင်းဆိုလာတော့လဲ ကိုယ့်အကြိုက်ဒေါ့ကီပေါ့….။လီးမချွတ်ပဲလှဲ့လို့ရလောက်အောင်နေရာကမရှိတော့ ချွတ်ပြီး နောက်ကနေ ဖင်ပေါက်နဲ့အဖုတ်ကြားကို အရည်ရွဲနေတဲ့လီးကြီးနဲ့ပွတ်သပ်ပေးလိုက်တော့… “ ထည့်တော့လေ ကိုလင်းးးး လိုးပေးပါဆို “ တဲ့မိုးရဲ့အားမလိုအားမရသံလေးထွက်လာတယ်။ အရည်တွေရွဲနေတဲ့အဖုတ်ထဲကိုလီးကြီးကမြွေကြီးတကောင်တွင်းဝင်သလိုပဲဝင်သွားတော့ မိုး ကရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပေးရင်း “ ဆောင့်ပေး ဆောင့်ပေး “ဆိုလို့ သူ့ဖင်သားနဲ့ကျွန်တော်ဆီးစပ်နဲ့ တဖောင်းဖောင်းနဲ့မြည်အောင် အချက် ၃၀ လောက်ဆောင့်ပေးလိုက်တော့ သူ့အဖုတ်ကနေညှစ်ပေးသလိုခံစားလိုက်ရပြီး။
သူ့ဆီက သက်ပြင်းချသံနဲ့မောနေတဲ့အသံမျိုးထွက်လာတော့သူကျေနပ်သွားပြီဆိုတာသိလိုက်တယ်။ ညီမလေးမျက်နှာငယ်နေမှာစိုးလို့သူ့ဘက်လဲကြည့်ရဦးမယ်လေ။ ညီမလေးလဲမိုးနဲ့လိုးနေတာကိုကြည့်ရင်းနဲ့ သူ့ဗိုက်ဘရေတာ အစွမ်းကိုလဲမကျေမနပ်ဖြစ်နေပုံပဲ။ ညီမလေးကိုလေးဘက်ထောက်ခိုင်းပြီး ခါးလေးကိုအောက်နှိမ့်လိုက်တော့လုံးခဲနေတဲ့ဖင်လုံးလေးကိုကြည့်ရင်း ညီမလေးအဖုတ်လေးထဲကို တထစ်ထစ်နဲ့လီးကြီးကိုခပ်ပြင်းပြင်းလေးသွင်းလိုက်တော့ညီမလေးဆီကအသံထွက်လာတယ်… “ အ…. အ…. အ…. ကောင်းလိုက်တာကိုလင်းရယ်…..” ဖင်လုံး၂လုံးကိုလက်နဲ့ဖြဲပြီး လီးကြီးကို ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ဆောင့်ဆောင့်လိုးတာညီမလေးလဲ အတော်လေးကောင်းနေတယ်။ “ ပလွတ် ….ဖတ် … ပလွတ် …. ဖတ်…..ပလွတ် “။
အသံထွက်တာတွေစည်းချက်မြန်လာသလို ကျယ်လဲကျယ်လာတယ်။ မိုးကလညီမလေးနို့လေးတွေကိုလှမ်းကိုင်ပြီးချေပေးနေတယ်။ ညီမလေးဆီက ညီးသံခပ်ကျယ်ကျယ်နဲ့ “ ပြီးတော့မယ် ကိုလင်းးးးးးး ပြီးတော့မယ်….ဆောင့်ပေး” လို့ပြောပြီးခဏနေမှာပဲညီမလေးငြိမ်သက်သွားသလိုကျွန်တော်လဲ အဖုတ်ထဲကလီးကိုဆွဲချွတ်ပြီးဘေးမှာအိပ်နေတဲ့မိုးရဲ့နို့ထွားထွားကြီးပေါ်ကို လရည်တွေပန်းထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်….. သူတို့၂ယောက်ရဲ့အလယ်မှာဝင်ကျောခင်းရင်းနဲ့ ” အီစိမ့်နေအောင်ကောင်းတယ် “ လို့ပြောလိုက်မိတယ်။ “ ၂ယောက်တယောက်ဒါပထမဆုံးဆိုတော့နောက်ဆို နည်းလမ်းတွေလေ့လာပြီး စမ်းသပ်ကြမယ်နော် “ ဆိုတော့ မိုးကဘာမှမပြောပဲပြုံးနေပြီး ညီမလေးကတော့ “ ကိုလင်း….လူလည်ကြီး “ တဲ့….. ပြီးပါပြီ။